Tsy ekena intsony ny fahatapahan-jiro lavareny, hoy hatrany i Solonandrasana Olivier. Tsy tokony hihoatra ny folo minitra raha ela indrindra ny fahatapahana ekena raha ara-teknika ihany hoy izy nibaiko ny Jirama. Nihevitra ny mponin'Antananarivo fa dia tantara ho tsaroan'ny taranaka sisa izany delestazy izany satria ny praiminisitra mihitsy no mibaiko fa tapitra ny delestazy. Inona akory no teo, fa mbola maharitra sy lavareny ny fahatapahan-jiro teto an-drenivohitra tamin’ny faran’ny herinandro iny. Tsy misy mihaino ny praiminisitra sa aretina efa tsy azo sitranina intsony ity delestazin’ny Jirama ity ?